नेपाली नेताले सिक्नैपर्ने : धनी देश नेदरल्याण्डका प्रधानमन्त्री साइकल चढेर कार्यालय जान्छन् – Dailny NpNews
नेपाली नेताले सिक्नैपर्ने : धनी देश नेदरल्याण्डका प्रधानमन्त्री साइकल चढेर कार्यालय जान्छन्
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भाद्र १५, २०७८ समय: १०:५१:३६
हाम्रो नेपालमा राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति,प्रधानमन्त्री लगायतका विशिष्टहरुको सवारी हुँदा सर्वसाधारणले धेरै दुःख पाउछन्।सवारीको ताँती हुन्छ । लावालस्कर नलगाई हिँड्दैनन् । उनीहरुको सवारी हुँदा सडक खाली गराइन्छ।
लामो समयसम्म ट्राफिक जाममा पर्दा सर्वसाधारणले पाउनु सम्मको सास्ती पाउँछन्।उनीहरुको सवारी हुँदा सार्वजानिक लगायत निजी सवारी साधनहरु चल्न रोक लगाइन्छ।नेपालका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु लगायत विशिष्ट ब्यक्तिहरुलाई त्यति ठूलो चुनौती हो त ? उनीहरुले के चै गरेका छन् ? सबैको यही शब्द आउँछ ।
तर अमेरिका, रुस, बेलायत, भारत, इजरायल लगायतका राष्ट्रप्रमुखको भन्दा धेरै सुरक्षा नेपालका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत विशिष्ट ब्यक्तिहरुलाई दिइन्छ। उता संसारकै धनी देशहरु मध्येमा एक युरोपको नेदरल्याण्डका प्रधानमन्त्री मार्क रुथ ( Mark Rutte ) भने साधारण साइकलमा चढेर आफ्नो कार्यालय जान्छन्।
यो देख्दा नेपालका नेता भनाउँदा जो सरकारी सुविधामा छन् उनीहरु आफैले आफैलाई कुरीकुरी भनेर लज्जित त पक्कै हुन्छन् । यसैले आज हामी विषय राख्दैछौ ।नेदरल्याण्डमा संवैधानिक राजसंस्था रहेको छ। उनी राजदरबारमा राजालाई भेट्न समेत सुरक्षा दलबल नलिइकन एक्लै साइकल चढेर चान्छन्। राजदरबारको ढोका छेउमा नै साईकल राख्छन् ।
उनी कुनै सुरक्षा दलबलविना नै साईकल चढेर मन्त्रालय जान्छन् । एक्लै हिँडडुल गर्छन् । बाटोमा सामान्य मानिस जसरी हाई हेल्लो गर्दै हात मिलाउँदै बोल्दै हिँड्छन् उनीपनि आफ्ना नागरिकसँग त्यसरी नै हिँड्छन् ।अनुशासन, मितव्यिता र असल संस्कार नेताहरुले जनतालाई सिकाउने हो। तर हाम्रो जस्तो गरिब देश नेपालका नेताहरु सत्ताको दुरुपयोग गर्दै जनताले तिरेको करमा लुटतन्त्र मच्चाउछन्, मोजमस्ती गर्छन्।
उनीहरुले मितव्ययिता अपनाएको फजुल खर्च रोकेको र जनताले तिरेको करको सम्मान् गरेको कहिकतै सुनिएको छैन। नेपालमा राजतन्त्र त सक्कियो तर अहिलेका नेता र सत्तामा पुगेकाहरुले राज्यकोष दोहन गरेर गरिब देशलाई झन्–झन् गरिब बनाएका छन्।
यसैले अहिले हज्जारौ छोटे महाराजाहरु सत्तामा छन् भनेर जनताले वितृष्णा जगाउने गर्दछन् । कोही एक ले त सुरुवात गर्नुस् । नत्र अझै तपाईहरुलाई नै यो तस्विरले कुरीकुरी भनेर लज्जा वोध गराउनेछ ।